Baiboly - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Boky, taratasy ary apokrifa
Ny teny hoe Baiboly dia avy amin'ny teny grika ary midika hoe boky (biblia). Ny "Book of Books" dia mizara ho testamenta taloha sy vaovao. Ny fanontana evanjelika dia misy soratra 39 ao amin'ny Testamenta Taloha ary asa soratra 27 ao amin'ny Testamenta Vaovao ary koa ireo asa soratra tara 11 amin'ny Testamenta Taloha - ilay antsoina hoe Apokrifa.
Ny boky tsirairay dia samy hafa be amin'ny toetrany, miovaova ny habeny ary koa ny fifantohan'ny votoaty sy ny fanehoana endrika. Ny sasany miasa bebe kokoa ho toy ny boky tantara, ny sasany ho boky fianarana, ho toy ny tononkalo sy fanoratana ara-paminaniana, ho fehezan-dalàna na taratasy.
Ny atin'ny Testamenta Taloha
maty Boky lalàna dia ahitana ny boky dimy an'i Mosesy ary mitantara ny tantaran'ny vahoaka israelita hatramin'ny niandohany ka hatramin'ny nanafahana azy ireo tamin'ny fanandevozana tany Egypt. Ireo boky hafa ao amin'ny Testamenta Taloha dia miresaka momba ny fandresen'ny Isiraelita tany Kanana, ny fanjakan'ny Isiraely sy ny Joda, ny sesitany ny Isiraelita ary tamin'ny farany dia niverina avy tany an-tsesitany tany Babylona izy ireo. Ny hira, ny tononkira ary ny ohabolana dia hita ao amin'ny OT ary koa ny bokin'ny mpaminany.
maty Boky tantara manokan-tena ho an'ny tantaran'ny Isiraely hatramin'ny fidirana amin'ny tany nampanantenaina ka hatramin'ny fandroahana hatramin'ny fiverenana avy tany an-tsesitany tany Babylona.
maty Boky fampianarana sy boky poetika mampita fahendrena, fahalalana ary traikefa izay nosoratana tamina teny filamatra fohy sy fitenenana na amina kalitao lyrical aza.
Ao amin'ny Bokin'ny mpaminany io dia momba ny tranga sy ny fizotrany tamin'izany fotoana izany, izay ampahafantaran'ireo mpaminany ny asan'Andriamanitra ary ampahatsiahiviny azy ireo ny fomba fiasa sy ny fiainana mifanaraka amin'izany ho an'ny olona. Ireo hafatra ireo, izay noforonina tamin'ny alàlan'ny fahitana sy aingam-panahy avy amin'Andriamanitra, dia nosoratan'ny mpaminany na ny mpianany ary nosoratana ho an'ny taranany.
Topy maso ny atin'ny Testamenta Taloha
Ny bokin'ny lalàna, ny bokin'i Mosesy dimy:
1. Bokin'i Moizy (Genesisy)
2. Bokin'i Moizy (Eksodosy)
3. Bokin'i Moizy (Levitikosy)
4. Bokin'i Moizy (Nomery)
5. Bokin'i Moizy (Deoteronomia)
Ireo boky tantara:
Ny bokin'i Josoa
Ny bokin'ny mpitsara
Ny bokin'i Rota
Ireo boky momba ny tantara (Tantara faha-1 sy faha-2)
Ny bokin'i Ezra
Ny bokin'i Nehemia
Ireo boky sy boky poetika:
Ny bokin'i Job
Ny ohabolan'i Salomona
Ny atin'ny Testamenta Vaovao
Ny Testamenta Vaovao dia mamaritra ny dikan'ny fiainana sy fahafatesan'i Jesosy amin'izao tontolo izao.
maty Boky tantara miaraka amin'ireo Evanjely efatra sy Asan'ny Apôstôly milaza an'i Jesosy Kristy, ny asa fanompoany, ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia momba ny fielezan'ny Kristianisma tao amin'ny Fanjakana Romanina sy momba ireo vondrom-piarahamonina Kristiana voalohany.
maty Letters angamba nosoratan'ny apôstôly isan-karazany ho an'ny vondrom-piarahamonina Kristiana. Ny tahiry lehibe indrindra dia ny taratasy telo ambin'ny folo an'ny apôstôly Paul.
Ao amin'ny Fanambarana ny Johannes io dia momba ny Apokalipsy, fanehoana ara-paminaniana ny faran'izao tontolo izao, atambatra amin'ny fanantenana lanitra vaovao sy tany vaovao.
Topy maso ny atin'ny Testamenta Vaovao
Ny taratasin'i Paoly ho an'ny Romana
Ny epistily voalohany sy faharoa izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintiana
Ny taratasin'i Paoly ho an'ny Galatianina
Ny taratasin'i Paoly ho an'ny Efesiana
Ny taratasin'i Paoly ho an'ny Filipiana
Ny taratasin'i Paoly ho an'ny Kolosiana
Ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesaloniana
Ny epistily voalohany sy faharoa avy tamin'i Paul ka hatrany amin'i Timoty ary tamin'i Titosy (Taratasy pastora)
Taratasy nosoratan'i Paoly ho an'i Filemona
Ny taratasy voalohany avy amin'i Peter
Ny taratasy voalohany avy amin'i Johannes
Ny taratasy faha-2 sy faha-3 avy amin'i Johannes
Ny taratasy ho an'ny Hebreo
Ny taratasy avy amin'i James
Ny taratasy avy amin'i Jodà
Ny Fanambaran'i Jaona (Apokalipsy)
Ireo asa soratra farany / apokrifa ao amin'ny Testamenta Taloha
Samy hafa ny fanontana Baiboly katolika sy protestanta ao amin'ny Testamenta Taloha. Ny kinova katolika dia misy boky vitsivitsy hafa:
Boky faha-1 sy faha-2 an'ny Makabeo
Ny fiangonana taloha dia naka ny fanontana grika, ilay antsoina hoe Septuagint, ho fototra. Ahitana boky betsaka kokoa noho ny fanontana hebreo nentim-paharazana avy any Jerosalema.
I Martin Luther kosa dia nampiasa ny fanontana hebreo ho an'ny fandikany, izay tsy nahitana ny boky mifanitsy aminy ao amin'ny Septuagint. Nampiany ny soratra masina hoe "Apocrypha" (ara-bakiteny: miafina, miafina) amin'ny fandikany azy.
Loharano: Fikambanan'ny Baiboly Alemanina http://www.die-bibel.de